Ezikiel 10 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
10 M wee hụ, ma, lee! n’elu mbara igwe+ ahụ nke dị n’elu isi ndị cherọb, e nwere ihe dị ka nkume safaya,+ ihe yiri ocheeze,+ nke dị n’elu ha. 2 O wee sị nwoke ahụ yi uwe linin,+ ee, ọ sịrị ya: “Banye n’etiti wiil ndị ahụ na-agba gburugburu,+ n’okpuru ndị cherọb ahụ, si n’agbata ndị cherọb ahụ chịjuo icheku ọkụ+ n’aka gị abụọ, wụọ ya n’obodo ahụ.”+ O wee banye n’ebe ahụ n’ihu m. 3 Ndị cherọb ahụ guzokwa n’akụkụ aka nri nke ụlọ ahụ mgbe nwoke ahụ banyere, ígwé ojii jupụtakwara n’ogige nke dị n’ime.+ 4 Ebube Jehova+ wee si n’ebe ndị cherọb ahụ nọ gbagoo gaa n’ọnụ ụzọ ụlọ ahụ, ígwé ojii wee jiri nwayọọ nwayọọ jupụta n’ụlọ ahụ,+ ìhè nke ebube Jehova jupụtakwara n’ogige ahụ. 5 A nọ n’ogige dị ná mpụta na-anụ ụda nku ndị cherọb+ ahụ. Ọ na-ada ka mgbe Chineke bụ́ Onye Pụrụ Ime Ihe Niile na-ekwu okwu.+ 6 O wee ruo na, mgbe o nyere nwoke ahụ yi uwe linin iwu, sị: “Gụrụ ọkụ n’etiti wiil ndị ahụ na-agba gburugburu, n’agbata ndị cherọb ahụ,” ọ banyere wee guzoro n’akụkụ wiil ndị ahụ. 7 Otu cherọb wee si n’etiti ndị cherọb ahụ matịa aka, si n’ọkụ+ ahụ nke dị n’agbata ndị cherọb+ ahụ gụrụ ọkụ gụnye n’ọbụ aka onye ahụ yi uwe linin,+ o wee were ya pụọ. 8 A hụkwara na ndị cherọb ahụ nwere ihe yiri aka mmadụ n’okpuru nku ha.+ 9 M wee hụ, ma, lee! e nwere wiil anọ dị n’akụkụ ndị cherọb ahụ, otu wiil dị n’akụkụ otu cherọb, otu wiil adịrị n’akụkụ cherọb ibe ya.+ Wiil ndị ahụ na-egbu maramara dị ka nkume krisolaịt. 10 A bịa n’otú ha dị, ha anọ yiri ibe ha, dị nnọọ ka otu wiil nke dị n’ime wiil ọzọ.+ 11 Ọ bụrụ na ha gawa, ha nwere ike ịga n’akụkụ anọ ha. Ha anaghị atụgharị atụgharị mgbe ha na-aga, n’ihi na ebe ọ bụla isi ya chere ihu, ọ bụ ebe ahụ ka ha na-aga. Ha anaghị atụgharị atụgharị mgbe ha na-aga.+ 12 Ahụ́ ha, azụ ha, aka ha, nku ha, na wiil ha niile jupụtara n’anya gbaa gburugburu.+ Ha anọ nwere wiil ha. 13 Ma a kpọrọ wiil ndị ahụ òkù ná ntị m, sị, “Wiil!” 14 Nke ọ bụla nwere ihu anọ.+ Ihu nke mbụ bụ ihu cherọb, ihu nke abụọ bụ ihu mmadụ,+ nke atọ bụ ihu ọdụm, nke anọ bụ ihu ugo.+ 15 Ndị cherọb ahụ na-ebili,+ ọ bụ ha bụ ihe ndị ahụ dị ndụ m hụrụ n’osimiri Kiba.+ 16 Mgbe ndị cherọb ahụ na-aga, wiil ndị ahụ na-eso ha aga;+ ọbụna mgbe ndị cherọb ahụ weliri nku ha ka ha wee si n’ala felie, wiil ndị ahụ dị n’akụkụ ha anaghị atụgharị atụgharị.+ 17 Mgbe ndị cherọb a guzooro otu ebe, wiil ndị ahụ na-eguzoro otu ebe; mgbe ha biliri,+ wiil ndị ahụ na-esoro ha bilie, n’ihi na mmụọ nsọ nke na-akpa ike n’ahụ́ ihe ndị ahụ dị ndụ dị n’ime ha.+ 18 Ebube+ Jehova wee si n’elu ọnụ ụzọ ụlọ ahụ pụọ ma kwụrụ n’elu ndị cherọb ahụ.+ 19 Ndị cherọb ahụ wee welie nku ha si n’ala felie+ n’ihu m. Mgbe ha pụrụ, wiil ndị ahụ dịkwa n’akụkụ ha; ha wee kwụrụ n’ọnụ ụzọ ámá nke dị n’ebe ọwụwa anyanwụ nke ụlọ Jehova, ebube Chineke Izrel sikwa n’elu bịa dịrị n’elu ha. 20 Ndị a bụ ihe ndị ahụ dị ndụ+ m hụrụ bụ́ ndị nọ n’okpuru Chineke Izrel, n’osimiri Kiba,+ m wee mata na ha bụ ndị cherọb. 21 Nke ọ bụla n’ime ha anọ nwere ihu anọ,+ nke ọ bụla nwekwara nku anọ, ihe yiri aka mmadụ dịkwa n’okpuru nku ha. 22 A bịa n’otú ihu ha dị, ha yiri ihu ndị ahụ m hụrụ n’akụkụ osimiri Kiba, ha yiri ha kpọmkwem.+ Nke ọ bụla n’ime ha na-aga ihu ihu.+